Bannaabax Looga Soo Horjeedo Jawaari,Xasan Iyo Shirka Cadaado Ayaa ka dhacay Gaalkacyo[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Bannaabax Looga Soo Horjeedo Jawaari,Xasan Iyo Shirka Cadaado Ayaa ka dhacay Gaalkacyo[Sawirro]
Magaaladda Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa maanta lagu qabtay Bannaanbax oo looga soo horjeeday Madaxda dawladda Federaalka Soomaaliya iyo dhismaha maamulka gobollada Galgaduud iyo koonfurta Mudug.
Banaanabaxan ayaa waxaa soo abaabulay maamulka gobolka Mudug,kan degmada Gaalkacyo ,Nabadoonada iyo shacabka magaaladda Gaalkacyo iyadoona si guud looga soo horjeeday Xasan Sheikh ,Jawaari iyo Shirka Cadaado.
Guddoomiyaha gobolka Mudug Cabduqaadir Shire oo dadweyne farabadan hadal u jeediyey ayaa sheegay in Bannaaanbaxan yahay midey ku cabirayaan dareenka shacabka iyo dawladda Puntland.
Waxa uu sheegay in sidoo kale Caalamka ku tusiyaan sida ay uga soo horjeedaan khaladaad ka jira deegaanka Cadaado iyo weliba Xadgudbka ay wadaan Madaxda dawladda Federaalka.
Sidoo kale waxa uu sheegay ineysan Puntland diidaneyn in maamul loo dhiso gobollada dhexe balse Madaxweynaha Federaalka uu ku xadgudbay Xuquuqda sharci ee gobollada Puntland.
Si kastaba shalay iyo maanta ,waxaa ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee Puntland bannaanabax looga soo horjeedo Madaxda Federaalka Soomaaliya iyo Shirka Cadaado ee maamulka loogu dhisayo koonfurta Mudug iyo Galgaduud.